> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan M2TS in DVD la M2TS in DVD gubi
Files M2TS waxaa ugu horayn loo isticmaalo qalabka Sony. Waxa ay ugu horayn la xiriira AVCHD , taas oo ah qaab u duubo oo loo maqli karo ee qeexidda video sare. Kaamirada isticmaalaan M2TS oo ah qaab AVCHD, qaab duubo gaar ah loogu sameeyaa kaamirada ah. Files waxa kale oo ay joogaan on compilations disc Blu-ray, sidaas daraaddeed iyagu waa awood u kaydinta lacagta arrin weyn oo ah xogta iyo macluumaadka tareenka. Si kastaba ha ahaatee, aad kari weydeen files filim kuwaas oo si toos ah ugu ciyaaryahan DVD ama TV. Xalka codka waa in loogu badalo M2TS in DVD . Halkan waxaan ku talinaynaa in aad M2TS ah in DVD gubi - Wondershare DVD Creator ( DVD Creator for Mac ) in ay kaa caawiyaan qaab beddelidda.
Barnaamijkan wuxuu la iman interface ah mid kooban oo user-friendly, taas oo ka dhigaysa in ay suurtagal tahay in ay gubaan video inay DVD ku qasabno. Waxa kale oo ay u dhoofiyaan aad movie in DVD Folder, ISO Image, ama .dvdmedia, kaas oo sidoo kale waa waxtar leh doorasho ah ee loo maqli media player ama gubi in DVD mar walba ee mustaqbalka. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fududahay in la isticmaalo barnaamijkan si ay u abuuraan DVD ka files M2TS. Free download version maxkamad ay halkan.
Sida loo badalo M2TS in DVD talaabo talaabo ah
Halkan waxaan ku qaadan M2TS in DVD gubi Windows Version tusaale ahaan, haddii aad tahay user Mac ah (Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 ka mid ah), oo aad kala socon kartaa tallaabooyinka la mid ah si ay u gubaan M2TS in DVD ee Mac.
Tallaabada 1. Load M2TS videos in ay gubi DVD ah
Hit "Import" in lagu daro videos barnaamijka. Videos laga keeno lagu soo bandhigi doonaa thumbnails bidixda. Waxaad si fudud u jiidi karaan iyo hoos u dhac in la beddelo si video iyo Falanqeynta videos on xaq. Talooyin: Waxaad kaloo ku dari kartaa sawiro si ay u sameeyaan DVD slideshow ah.
Tallaabada 2. Edit M2TS videos
Tani M2TS in DVD Creator yimaado la dhisay-in video editor oo kuu ogolaanaya in aad noola, isku shaandheyn, ku dar watermarks, goo videos, iwm Si aad u furato editor video ah, waxaad sidoo kale ku dhacay karaa button edit ah video dhinaceeda ama muujiyo video ah oo xaq u guji waxay, markaas dooran "Edit".
Tallaabada 3. Dooro iyo astaysto DVD bedeley
Waxaad dooran kartaa ka horena 40 arrimo DVD menu lacag la'aan ah DVD fiican raadinaya. Intaas waxaa sii dheer, waxaad astaysto menu DVD ah la beddelo badhamada menu, mab, soo jeeda, thumbnails, iwm si ay u sameeyaan waxaa ka badan kartoo. No menu ayaa sidoo kale taageeray.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha iyo badalo M2TS in DVD
Guudmar DVD ah si loo hubiyo in wax walba waa sida aad jeceshahay. Ka dib markii dhammaan goobaha, ku dhacay "Guba" si loogu badalo M2TS in DVD.
Iyadoo Wondershare xirfad DVD Creator , waxaad si fudud u bedeli karaan M2TS in DVD si aad ku raaxaysan karaan filimada la qoyskaaga guriga. Hoos waxaa ku tutorial video ah:
Free download M2TS in DVD gubi: